Free internet - MYSTERY ZILLION
June 2009 edited February 2010 in Networking
www.instruables.com ကတွေ့တဲ့ အကြောင်းလေးကို တင်ပါရစေ။
wireless wifi adapter လေးနဲ့ Kilometer အကွာအေ၀းမှာတဲ့ network ကို ချိတ်ဖို့ပါ။
ဒီ ခေါ်င်းစဉ်လေးရဲ့ ဦးတည်ချက်ကို ထပ်မံဖြည့်စွပ်လိုက်ပါတယ်။
Internet ကနေ free ပေးလို့ရသမျှတွေကို Free ပေးကြရအောင်။
ဒီ Network ဆင်ဖို့က
(၁) wireless wifi adapter (USB) တစ်ခု
(၂) Network Cable (CAT-5) 10 Meter တစ်ချောင်း
(၃) ခေါက်ဆွဲပြုတ်ရင် ပြန်ဆယ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ အလူမီနီယံ ဇကာ တစ်ခု
(၄) USB cable (2 meter) တစ်ချောင်း
(၁) USB cable ကို နှစ်ပိုင်းဖြတ်
(၂) Network Cable (CAT-5) နှစ်ဖက်ထိပ်တွေကို Shield တွေခွာ
(၃) CAT-5 ကို Shield ခွာလိုက်ရင် ကြိုး ၈ ချောင်းတွေ့ရမယ် အဲဒီ့ကြိုးတွေကို သူ့အစုံလိုက်အတိုင်း ဆက်လိုက်ပါ
ကိုprinceakarit အဲဒါကိုရေစိုခံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ ပြောပေးပါဦး ခုဟာကမိုးတွင်းဆိုတော့ အပြင်ထုတ်ဖို့မလွယ်ဘူးလေ :106:
သေသေချာချာလေး အသေးစိတ်ပြောပေးပါ။ သိပ်နားမလည်သေးဘူး။ ၁ ကီလိုမီတာ အကွာအေ၀းအထိရနိုင်တာလား။ ပိုက်ပိုက်ဘယ်လောက်လောက်ကုန်မှာလဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ အသေးစိတ် အသေးစိတ်။ တစ်ခုမှ မကြီးပါစေနဲ့။
ထင်တာတော့ ဝိုင်ယာလက်ကို ဟက်မယ်ထင်တယ်။
area က များများရတော့ ဟက်စရာ ဝိုင်ယာလက်ဟော့စပေါ့တွေလည်း များများပိုရတာပေါ့။ :39:
ပေးထားတဲ့ Link ကခေါ်မရဘူးဗျ။ ဒီsiteကိုပြောတာလားမသိဘူးး
ဆက်ရေးပါခင်ဗျား။ စိတ်၀င်စားပါတယ်။ Free ဆိုလို့
lo chin tal...a naw ko lar loat pay bar lar...loat tat lo bya :D
branaung wrote: »
Lo chin tal...a naw ko lar loat pay bar lar...loat tat lo bya :d:d
အခုလို အင်တိုက်အားတိုက် ၀င်ရောက် စိတ်၀င်စားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မေးလာသမျှတွေကို တစ်ခုမကျန်ပြန်ဖြေပေးပါ့မယ်။ မဖြေခင် instruction ကို ပြီးအောင် အရင်ရေးလိုက်ပါဦးမယ်။
(2)UTP Cable (Network Cable)
(3)Small PVC Pipe
(5)thermofit (wire တွေဆက်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ ရာဘာပိုက်လေးတွေ)
(က) UTP cable ကို3လက်မလောက် အပြင်က shield တွေကိုခွာလိုက်
(ခ) USB cable ကို အလယ်ကနှစ်ပိုင်းဖြတ်ပြီး3လက်မလောက် shield တွေခွာထား
(ဂ) UTP cable အစွန်းနှစ်ဘက်ကို PVC ပိုက်ကလေးတွေစွတ်
(ဃ) USB cable ရဲ့ကြိုးစလေးတွေကို thermofit လေးတွေလိုက်စွတ်
(င) UTP cable အစတွေကို ဒီလိုပူးချည်
(i) white orange & orange
(ii) white green & green
(iii) white Blue & Blue
(iv) and white brown & brown
(စ) UTP နဲ့ USB ကို ဒီလိုဆက်
i ကို red,
ii ကို white,
iii ကို green,
iv ကို black.
(ဆ) ပြီးရင် ဂဟေဆက်ပေါ်ကို thermofit တွေစွတ် PVC ထပ်အုပ်။ တိပ်နဲ့ရေလုံအောင်ကပ်။
ကျွန်တော်တို့ Forum မှာ အင်္ဂလိပ်လို ဒါမှမဟုတ် ဗမာ(မြန်မာ)လိုပဲ ရေးကြဖို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျား:)
အခု ကျန်သေးတဲ့ နောက်ဆုံးအပိုင်းကို စာနဲ့မရေးတော့ဘဲ ပုံတွေနဲ့ဘဲပြလိုက်တော့မယ်။ နားလည်နိုင်မှာပါ။ စာရိုက်ရတာပျင်းလို့။
picture (1) Finallized
Picture (2) First Step
a) Cooking strainer
b) USB Wireless Thumb Drive (g or b/g)
c) USB extension. -- first instruction.
-Using the snips and cup outahole JUST big enough for the USB extension cord.
Squeeze the tip of the USB cord through hole.
-Adjust everything so the thumbdrive is at the FOCAL POINT of the parabola (I just eyeballed it).
-Fasten the USB cord in to place.
Testing the Signal Strainer
Testing the Signal Strainer:
1) Find your favorite access point!
2) get as far away as possible! (While keeping line-of-sight)
3) Use software like NetStumbler to see the signal strength.
4) Adjust your Signal Strainer where necessary.
Network key ကို ဒီလို အရယူပေါ့။
software က ဒီမှာ ယူလိုက်။ အားလုံးရှင်းတယ်နော်။:68::68:
မရှင်းရင် ဒီကို email ပို့လိုက်:6::77:
USB ကိုဆိုရင် ပလပ်စတစ် ဘူးအကြည်လေးနဲ့အုပ်ထားပြီး အပေါ်နည်းနည်း ထောင်ထားဒါပေါ့။ ကြိုးဆက်ကြောင်းအတွက်ကတော့ Instruction မှာရှင်းထားပါတယ်။
windows system မှာပါတဲ့ wireless network search နဲ့ ရှာလိုက်ပါ။ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
white wrote: »
အသေးစိတ် ပြန်ရှင်းပေးထားပါတယ်။ 20 KM အထိရပါတယ်။ မိုးရွာရင်တော့ ပိတ်ထားပေါ့နော်။ ဘယ်လောက်ကုန်မှာလဲဆိုတာကတော့ ....... instruction မှာပြထားတဲ့အတိုင်း စုံစမ်းကြည့်ပါ။ ၁သိန်းမကျော်ပါဘူး။ :O:D:D:D
သည်းခံလော့ ဒကာတော် အဂုင်္လိမာလ
ဟုတ်ကဲ့။ စမ်းပြီးပါပြီ။ IP ကတော့ ချိတ်မိလိုက်တဲ့ network ရဲ့ router/server ရဲ့ DHCP က ရပါတယ်။ မပူပါနဲ့။ လက်တွေ့လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ စရိတ်လည်းသက်သာပါတယ်။:39::39::39:
တီထွင်စမ်းသပ်လေ့လာချင်စိတ်ရှိတဲ့ သူတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
လေအားလျှပ်စစ်၊ ဒုံးကျည်၊ ဆိုလာပြား၊ လက်ပစ်ဗုံး၊ စသဖြင့် တော်တော်စုံပါတယ်၊ ဟက်ဒစ်အပျက်ကို ယူအက်စ်ဘီ Drive အဖြစ်ပြောင်းသုံးတာမျိုး၊ မီးခိုးဗုံး ပြုလုပ်ပုံမျိုး (ဘောလုံးပွဲတွေမှာလုပ်လို့ကောင်းတယ်) ပျော်စရာ ရီစရာတွေလည်း ပါတယ်၊
ဆိုက်မှာ အကောင့်လုပ်ထားရင် PDF Ebook အနေနဲ့ ဒေါင်းထားလို့ရပါတယ်
princeakarit ပေးထားတဲ့ လင့်က မှားနေတယ်ထင်လို့ ပြင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
NyaLu wrote: »
ကျနော်အိမ်မှာတော့ ဒီ site ထဲက projectတွေ တဖြည်းဖြည်းများများလာနေတယ်။
ကုန်ကျစရိတ်ကလည်း 10000 အောက်မှာခြည်းဘဲ။
ရဲ့အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားလို့ယူဆပါတယ်။ ဒီ Software က Network Key ကိုတကယ်ရှာပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် Laptop ထဲမှာထည့်သုံးပြီး Laptop ကနေရှာတွေ့တဲ့ Network ထဲ ခိုး၀င်လို့ရနိုင်မယ် ဒီလိုဟုတ်လားခင်ဗျား။ အပေါ်မှာလုပ်ပြခဲ့တာတွေက Outdoor Unit လုပ်ပြီး ေ၀းေ၀းကိုမိချင်လို့လုပ်တဲ့ဟာနဲ့တူတယ်။ နောက် IP အတွက်က router ကနေ DHCP မပေးဘဲ Server ကနေ Domain ထဲ၀င်လာမှ DHCP ပေးထားတဲ့ Network မျိုးထဲ၀င်ဖို့ဆိုရင်တော့ နောက်ထပ် လုပ်စရာတွေကျန်နေဦးမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ 20km ဆိုတော့ အေ၀းကြီးရတာပဲ။ 20km radius လား diameter လားမသိနော်။ နည်းပညာမျှေ၀မှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ကိုနေလူ ... တဲ့...
ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ free wireless တွေတော့ရှိပါတယ်။ကြိုးစာကြည့်ပါ။:68::68::68:
ကျနော်သိတာ Wireless Key View ကသိပြီးသား Wirelesskey တွေကို recover လုပ်ပေးတာ၊ ပြန်ပြပေးတာဗျ။ Cracker မဟုတ်သလိုပဲ။ မဟုတ်ရင်တော့ Aircrack-ng series ကိုပဲအားကိုးရမှာပေါ့။ :)
Topic နဲနဲချော်သွားမလားမသိဘူး။ ကိုရဲထက်ပြောတာမှာ "Domain ထဲ၀င်လာမှ DHCP ပေးထားတဲ့ Network မျိုး" ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးကိုပြောတာလဲမသိဘူး။ စိတ်ဝင်စားလို့
Unauthorized မဖြစ်စေချင်ပါ။ ကျနော်လုပ်နေတဲ့ hacker ဆိုတာ hardware တွေကို (မူယင်း function အပြင်) ဘယ်လိုမျိုး ထပ်ပြီးလုပ်လို့ရမလဲဆိုပြီးတော့ hack တာပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် မသမာတာတွေ ရှောင်စေချင်ပါတယ်:68::68::68:
ယောင်ပေစူး wrote: »
ခေါက်ဆွဲပြုတ်နေပြီလား။ ကျက်ရင်ခေါ်လိုက်လေ လာအားပေးမယ်။ ပြီးရင် hack ကြတာပေါ့။ နော....:)):)):)):6::6:
နောက်တစ်ခု Hardware hack ဖို့ရှိသေးတယ်ဗျ။
အဲဒါကတော့ ဘယ်မှာမှ ရှာလို့မတွေ့သေးလို့။ ကိုယ်ဖာသာကိုယ်ဘဲ စမ်းသပ်နေရတယ်။
ကျနော်ကြိုးစားကြည့်နေတာက MP4 တွေနဲ့ Network သုံးမယ်။ MP4 တွေကို OS ထည့်မယ်။ MP4 တွေနဲ့ Internet သုံးမယ် ပေါ့။ နည်းနည်းတော့ ဖြစ်လာပါတယ်။ ခက်နေတာက OS ထည့်လို့မရတော့ သူ့ရဲ့ firmware ကိုပြန်ပြင်နေရတာဘဲ။ အချိန်ရရင် အစ အဆုံးဒီမှာဘဲ တင်ပေးလိုက်ပါမယ်။ အဲဒီ့တော့မှ အကူအညီတွေတောင်း တိုင်ပင် ဆွေနွေကြတာပေါ့။:43::35::35:
Divinity wrote: »
Work group မှာ DHCP ပေးမသုံးဘူးဗျာ။ Manual ပဲလက်ခံမယ်ပေါ့။ Domain User မှ DHCP ပေးသုံးမယ်ဗျာ။ အဲလိုမျိုးကိုပြောတာပါဗျာ ကိုDivinity ။:) အဲဒီတော့ Domain ထဲ၀င်နိုင်ဖို့ User Name, Password သိဖို့လိုမယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်လည်း စမး်ဘူးတယ် .... အဲဒါလုံး၀အဆင်မပြေပါဘူး... နည်းနည်းတော့ ကြာပြီ ကိုယ်မှာရှိတဲ့ wireless ကို range တက်ချင်လို့ စမ်းကြည့်တာပါ... မရပါဘူး... နောက်ဆုံး.. adapter ပါ ဂေါက်ချင်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်.... သူက range ကို ex ထပ်လုပ်လိုက်ပါတာ... တခြားနည်းတွေအများကြီးရှိတယ်.. ဥပမာ ထမင်းဘူး နဲ့လုပ်တာတို့ဘာလို့ေပေါ့... ဒါပေမဲ့ မဆိုးပါဘူး... နည်းနည်းတော့ ဖမ်းနိုင်တဲ့အစွမ်းတော့တက်လာတယ် ... နောက်ပိုင်း နည်းနည်းဂေါက်ချင်သွားတယ်... key viewer တော့မစမ်းကသေးဘူ.းးး... share တာ ကျေးဇူး.................
Cyberhack wrote: »
extend ကြိုးအရမ်းရှည်နေရင် မကောင်းပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ် ကြာရင်found new hardware တွေပါဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းရှိပါတယ်။:68::68:
အဲဒါက Adapter ကို5ဗို့ power supply နဲ့ ကျွေးထားရင်ရပါတယ်။:67::5:
လုံး၀ ဂေါက်သ&#[email protected]ГЏГЏГ°8140;းတဲ့ Adapter ဆိုရင် cover ကိုခွာပြီး circuit မှာပါတဲ့ crystal capacity (27.00) ကိုလဲလိုက်ရင်ရပါတယ်။ အဲဒီနည်းက found new hardware ဆိုပြီး driver ကိုလုံး၀မသိတော့တဲ့ USB adapter တွေ၊ လုံး၀ကို မတတ်တော့တဲ့ USB တွေကိုပြန်ပြုုပြင်တဲ့နည်းပါ။ ကိုယ်တိုင် ရှာတွေထားတာမို့ အာမခံပါတယ် :D:D:101::101::101:
cover ကိုခွာပြီး circuit မှာပါတဲ့ crystal capacity (27.00) ကိုလဲလိုက်ရင်ရပါတယ်။ အဲဒီနည်းက found new hardware ဆိုပြီး driver ကိုလုံး၀မသိတော့တဲ့ usb adapter တွေ၊ လုံး၀ကို မတတ်တော့တဲ့ usb တွေကိုပြန်ပြုုပြင်တဲ့နည်းပါ။ ကိုယ်တိုင် ရှာတွေထားတာမို့ အာမခံပါတယ် :d:d:d:101::101::101:
ကျနော် MS word နဲ့ လုပ်လိုက်မယ် ပြီးရင်ပို့ပေးမယ်။:65:
gmail invite လုပ်လိုက်ပေါ့။:68:
အကိုရေ... mail နဲ့ ပို့တာလဲ ပို့တာပေါ့.. ဒါပေမယ့် ဒီမှာလဲ တင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ အားလုံးလေ့လာလို့ ရတာပေါ့။ ကျေးဇူးပါ။
sevenlamp wrote: »
그렇습니다. 나는 알고 있습니다.:d
ဒီဟာကို Hardware Hacker ဆိုပြီး Topic ထုတ်ရင်ကောင်းမလား။ အကြံပေးကြပါဦး၊ အားးလုံးကိုပြောတာပါ။ Topic ထုတ်ပြီးမှ Thread တွေမရရင်......:103::103:
sorry! I didn't know the forum rules and regulations. I will avoid using myanglish next time when I post . :77::77::77:
Movie5ကို Free ကြည့်လို့ရမယ်နည်းလေး ရှိတယ်ဗျ။ တစ်ချို့တွေလဲ သိကြမှာပါ။ အဲဒါကို ဒီမှာတင်ရင် ကောင်းပါ့မလား။ အက်ဒမင်များ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပေကြပါ။ မီးစိမ်းပြရင်တော့.:)):)):))
ဂယ်လားဟင်... :d:d:d အက်မင်တော့ဟုတ်ဘူး မီးစိမ်းတော့ပြတယ်.. :p:p:p
အက်ဒမင်တို့ရေ ဖြေကြပါဦး။ forum ကို မထိခိုက်စေချင်လို့ပါ။
နည်းကို တခြားနေရာမှာရေးပြီး လင့်ထိုးလိုက်ပါလား ရေးပါသိချင်ပါတယ်။:d
အဲလိုလုပ်ဖို့က ကွန်နက်ရှင်က ကောင်းဘူးဗျ။:106:
GSM SIM Card Clone တဲ့:6:
သူလဲ လွယ်တယ် ဟဲဟဲဟဲ:)):)):))
ဒါလေးတော့ စိတ်၀င်စားတယ်။ ပြောပြရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန် ပေါ့ဗျာ။ စောင့်နေမယ်နော်။ :d :d
ရေးသာ ရေးချလိုက်ပါ Admin တွေက မီးစိမ်းပြမှာ:P:P:P
Vassilihunt wrote: »
မနက်ဖြန်အထိမှ Reply မလာရင်။ green လို့မှတ်ယူပြီး။ Free ပါတော့မယ်။:39:
Form my home , I can easily connect to the nearby cafe' wireless network.
but it needs network keys in order to connect to the available wirless network. so I used wirelesskeyview to view
pw which apperared in key(hex)and then copy to network key box. I have been trying to connect to the wl network
but it doesn't work..trying to connect to the wl about 1 min and then I got disconnected .Then there is no wl network in my range .... pls help me .